Kirsten Baete avy any Nebraska dia nandresy tamin'ny fanasana NCAA Women's White Sands Bahamas NCAA
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Kirsten Baete avy any Nebraska dia nandresy tamin'ny fanasana NCAA Women's White Sands Bahamas NCAA
Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • People • Sports • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Kirsten Baete, zokiny fahadimy, avy any Nebraska, dia nitifitra ny fihodinana farany tamin'ny par 72 tamin'ny alahady mba hanantonana ny fandresena amin'ny tariby amin'ny NCAA Invitational White Sands Bahamas isan-taona. Ny fandresena, tamin'ny alalan'ny kapoka iray nanoloana an'i Emily Hawkins avy any Campbell, no asa voalohany nataon'i Baete.
Nahazo ny anaram-boninahitry ny ekipa i Campbell, mpikatroka isam-paritra NCAA tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nandresy ny Cornhuskers tamin'ny kapoka efatra.
Mitohy amin'ity herinandro ity ao amin'ny Ocean Club Golf Course ny White Sands Bahamas NCAA Invitational, manasongadina ny sasany amin'ireo ekipa golf ambony indrindra any Etazonia.
Manaraka izany ny ekipa lehilahy 12 amin’ity herinandro ity ao amin’ny Ocean Club Golf Course.
Baete dia nahavita tamin'ny 10 ambanin'ny 206, raha i Hawkins kosa dia nitifitra 7 ambanin'ny par 65 ka nandefa 207 tao amin'ny Ocean Club Golf Course tao amin'ny Atlantis Resort. Mikayla Dubnik avy amin'ny Mercer no fahatelo tamin'ny isa 68-211.
Miaraka amin'ny mpilalao telo nahavita teo amin'ny laharana faha-10 voalohany, i Campbell, mpikatroka isam-paritra NCAA tamin'ny fiandohan'ity taona ity, no nahazo ny anaram-boninahitra ekipa, nandresy ny Cornhuskers tamin'ny kapoka efatra, raha ny University of Miami mpampiantrano kosa no nahazo ny laharana fahatelo.
“Te-hisaotra ny olona rehetra tao amin'ny taranja aho – ny mpitantana, ny pro shop; tena tsy mampino ny taranja”, hoy i Baete taorian'ny nandefasany ny isa ambany indrindra tamin'ny asany sy ny laharana faha-10 amin'ny asany. “Tena tsara ilay izy ary natolotro an-tanana ny taranja vaovao tiako indrindra.”
“Ity no fandresena voalohany azon'i Kirstin, noho izany dia tena faly izahay hahazo ity [fandresena] ity eo ambany fehikibony,” hoy i Lisa Johnson, mpanazatra Nebraska. "Niasa mafy izy tao anatin'ny dimy taona tao Nebraska, ary atleta mahay izy ary mpilalao mahay manazatra ka mahafinaritra azy ny mahazo an'io fandresena io ary misolo tena ny Huskers."
Campbell dia namoaka totalin'ny mpilalao efatra tamin'ny 10 ambanin'ny 854 tamin'ny lavaka 54 niaraka tamin'i Hawkins sy Anna Nordfors nitarika ny lalana. Nordfors, tamin'ny fihodinana farany 72, dia nifarana tamin'ny laharana fahefatra tsirairay tamin'ny totalin'ny 4 ambanin'ny 212. Nisaraka tamin’ny isa 10 i Tomita Arejolath tamin’ny isa 69-217 raha nanampy 226 kosa i Patricia Garre Munoz.
"Tena niavaka ity ary herinandro tonga lafatra ho anay," hoy i John Crooks, mpanazatra an'i Campbell. "Ity ekipa ity dia nanao izay nilaina ary Emily Hawkins dia nitifitra 65 androany ary tena miavaka izany. Ny mpikambana tsirairay ao amin'ny ekipa dia nitifitra ambany ary nanampy an'i Campbell tamin'ity taom-pilalaovana ity. "
“Miarahaba indrindra an'i Kirsten Baete sy ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanontana vehivavy an'ny White Sands Bahamas NCAA Invitational,” hoy ny praiminisitra lefitra I. Chester Cooper, Minisitry ny Fizahantany, Fampiasam-bola & Aviation Bahamas. "Ny Bahamas dia manana fomban-drazana efa hatry ny ela amin'ny fisarihana ireo mpilalao golf avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hiaina ny lalao golf amin'izao tontolo izao, ary manantena izahay fa raha mbola eto ny ekipan'ny Anjerimanontolo dia mankafy ireo nosy tsara tarehy misy antsika izy ireo, na ivelan'ny kianja golf."
Ny isa farany amin'ny ekipa: Campbell 854, Nebraska 858, Miami 862, Mercer 870, Florida International 900, Northern Illinois 905, Iowa 908.
The prestigious White Sands Bahamas NCAA Invitational, manasongadina ny sasany amin'ireo ekipa mpilalao golf tsara indrindra any Etazonia, dia mitohy amin'ity herinandro ity ao amin'ny Ocean Club Golf Course miaraka amin'ny fifaninanana lehilahy ahitana sekoly 12, anisan'izany ny University of Arkansas mpampiantrano ao amin'ny Little Rock. Taorian’ny fanazaran-tena roa andro nanomboka ny alarobia dia hanomboka ny zoma 54 oktobra ny fifaninanana 29-hole amin’ny taranja Ocean Club mirefy 7,159 XNUMX metatra.
Ho fanampin'ny Little Rock, ekipa hafa mifaninana amin'ny hetsika dia ahitana ny Bowling Green State University, East Tennessee State University, Florida Atlantic University, Florida Gulf Coast University, Jacksonville University, Lamar University, Lipscomb University, University of Michigan, University of Mississippi, University ao San Francisco sy ny University of South Florida.
Ny University of Houston dia nandresy tamin'ny hetsika fanokafana tamin'ny taona 2019 niaraka tamin'ny fitambaran'olona 833.
Ny fandaharam-potoanan'ny hetsika ho an'ny fanasana NCAA ho an'ny White Sands Bahamas lehilahy:
Alarobia 27 Oktobra: Raikitra ny fampiharana amin'ny ekipa
Ocean Club Golf Recipe Team Recipe 6 hariva
Alakamisy 28 Oktobra: Fihodinana fanazaran-tena
Zoma 29 Oktobra: Fiandohan'ny basy 1 - 8 maraina
Sabotsy 30 Oktobra: Fiandohan'ny basy 2 - 8 maraina
Alahady 31 Oktobra: Fiandohan'ny basy 3 - 8 maraina
Fanolorana amboara (Tompondakan'ny tsirairay sy ekipa)
Miaraka amin'ny nosy sy cay 700 mahery ary toerana itodiana 16 tsy manam-paharoa, Ny Bahamas 50 kilaometatra monja miala ny morontsirak'i Florida, manolotra fandosirana mora amin'ny sidina izay mitondra ny mpandeha hiala amin'ny andavanandrony. Ny Nosy Bahamas dia manana jono, antsitrika, sambo, ary an'arivony kilaometatra amin'ny rano sy tora-pasika mahafinaritra indrindra eto an-tany miandry fianakaviana, mpivady ary mpitsangatsangana. Tsidiho ny nosy rehetra atolotra ao amin'ny www.bahamas.com na amin'ny Facebook, YouTube, na Instagram hahitana hoe nahoana no tsara kokoa ny any Bahamas.
Fifandraisana: Mike Harmon